Home Wararka Deg deg: weerar ka dhacay Magaalada Boossaaso
Deg deg: weerar ka dhacay Magaalada Boossaaso
Wararka ka imaanaya Magaalada Boossaaso ayaa sheeya in halkaas lagu weeraray Laba qof oo shacab ah. Sida warka ay ku heshay MOL midna ka mida labadaa qof waa dhintay mid klana waa dhaawac. Falkaan ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee dowladda hoose ee Boossaaso.
Kooxo hubaysan ayaa la sheegay in bastoolado kufureen dadkaas, kuwaasi oo ka baxsaday goobta. Wararka qaar ayaa sheegaya inay ka mid ahaayeen ciimada badda ee Puntland inkasta oo aan la xaqiijinin. Wixii ka soo kordha warkaan dib ayaan idinkaaga soo sheegi doonaa.
Previous articleMW Farmaajo oo xalay u sheegay beesha Daarood in qabiilnimo lagula dagaalayo
Next articleSomalia plunges into fresh political crisis as Farmajo faces impeachment motion
Ahlusunna oo qaadacday Gudiga qaban-qaabada Doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee...
Qoor Qoor oo sii wada beentii, sheegayna in Doorasho loo wada...